४ दशकदेखि निरन्तर निर्यातमा युनिक ड्रागन कार्पेट हाउस (फोटोफिचर)
नेपालबाट कुनै समय बढी मात्रामा निर्यात हुने वस्तु नै नेपाली गलैचा (कार्पेट) थियो । अहिले कम निर्यात भएपनि काठमाडौंको मुटु मानिएको ठमेलमा ४ दशकदेखि यही व्यवसायमा अडिग छन्, युनिक ड्रागन कार्पेट हाउस ।
सन् १९७६ देखि व्यापार थालनी गरेको ककनी गाउँपालिका नुवाकोट निवासी हाउसका निर्देशक बासुदेव थपलियाले बताए । युरोप, अमेरिका लगायतका देशहरुमा निर्यात हुने कार्पेट पछिल्लो चरण खासै व्यापार नभएको उनको अनुभव छ ।
४२ वर्षअघि यस ठाउँमा व्यापार थालनी गर्दा अरु पसलहरू नरहेको उनी बताउँछन् । ठमेलको नरसिंह चोक नजिकै रहेको उनको पसलमा विभिन्न ब्राण्डका होलसेल, रिटेलमा कार्पेटहरू पाइन्छ । उनले १७५ देखि ४५ हजार मूल्यसम्मको कार्पेट बेचेको बताए । तर अहिले महँगी बढेको छ तर त्यति थोरै मूल्यमा पाउन गाह्रो छ, उनले सुनाए ।
नेपालमा कार्पेटको इतिहास
वि.सं. २०३२ सालतिर विश्व बजारमा कार्पेट निर्यात गर्ने देश मोरक्को रहेको थियो । मोरक्कोको अर्थतन्त्र धराशयी हुने र नेपालको कार्पेट उद्योग फस्टाउँदै जाने काम एकैपटक भयो । वि.सं. २०४० देखि ५० को दशकसम्म नेपाली कार्पेट उद्योग दिन प्रतिदिन उकालो लागिरह्यो । मोरक्कोको कार्पेटले लिएको बजार नेपाली कार्पेटले लिन थाल्यो । नेपाली कार्पेटको निर्यात युरोपेली देशमा बढी हुन थाल्यो । खासगरी जर्मनीमा यहाँको हाते बुनाइका कार्पेट बढी रुचाइएका हुन् ।
२०५० को दशकमा मुलुकमा दश हजारभन्दा बढी संख्यात्मक गलैंचा उद्योग खुलिसकेका थिए भने चार लाखभन्दा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । त्यो बेलामा ३६ लाख वर्गमिटरसम्म कार्पेट निर्यात हुने गर्दथे ।
उकालो लागेको कार्पेट निर्यात व्यवसाय त्यति धेरै टिकेन । २०६० को दशकको सुरुसँगै नेपाली कार्पेट ओरालो लाग्न थाले । अहिले ५ लाख वर्गमिटरमा हाराहारीमा निर्यात भइरहेको छ ।